Ithegi: seo | Martech Zone
Sisebenza nomxhasi ngoku oneshishini elitsha, uphawu olutsha, isizinda esitsha, kunye newebhusayithi entsha ye-ecommerce kushishino olukhuphisana kakhulu. Ukuba uyayiqonda indlela abathengi kunye neenjini zokukhangela ezisebenza ngayo, uyaqonda ukuba oku akuyona intaba elula ukunyuka. Iimpawu kunye nemimandla enembali ende yegunya kumagama angundoqo athile anexesha elilula kakhulu lokugcina kunye nokukhulisa umgangatho wabo wezinto eziphilayo. Ukuqonda i-SEO kwi-2022 enye
Kule mihla kunye nobudala, thina njengabathengi sifuna ukugaya umxholo ngokukhawuleza kwaye ngokufanelekileyo ngomzamo omncinci kakhulu. Kungenxa yoko le nto uGoogle wazisa eyakhe inguqulelo yomxholo omfutshane obizwa ngokuba ngamabali eWebhu kaGoogle. Kodwa ngawaphi amabali ewebhu kaGoogle kwaye anegalelo njani ekuntywilisweni ngakumbi kunye namava omntu? Kutheni usebenzisa amabali ewebhu kaGoogle kwaye unokwenza njani eyakho? Esi sikhokelo esisebenzayo siya kukunceda uqonde ngcono